Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. विष्णु पौडेल र वामदेव गौतमको सिंगापुर यात्रा अर्थपूर्ण ! – Emountain TV
विष्णु पौडेल र वामदेव गौतमको सिंगापुर यात्रा अर्थपूर्ण !
काठमाडौं, १८ भदौ । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारको सिलसिलामा सिंगापुरमा हुनुहुन्छ । उपचारपछि प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार नेपाल फर्कने कार्यक्रम तय भएको समाचार पहिल्यै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
तर अहिले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेल र नेता बामदेव गौतम सिंगापुर गएपछि यस विषयमा अनेकौ आशंका गर्न थालिएको छ । सरकारले नै प्रधानमन्त्रीको अवस्था सामान्य रहेको र उहाँ शुक्रबार स्वदेश फर्कने बताइरहेका बेला नेकपाका दुई नेता पौडेल र गौतम सिंगापुर किन गए भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेको छ । पौडेल र गौतम सिंगापुर यात्रालाई सामान्य मान्न नसकिने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
सिंगापुरमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उहाँका निजी चिकित्सक लगायत सरकारबाट पनि जानकारी गराउँदै आइएको छ ।
त्यस्तै उपचारमै रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दुई पटक भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रीमण्डलको बैठक सञ्चालन गर्नुभएको हो । यसले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै मान्न सकिने अवस्था छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली उपचार सकेर शुक्रबार स्वदेश फिर्ता हुने कार्यक्रम तय भएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले जानकारी गराइसक्नु भएको छ ।
सूचना प्रविधी तथा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले दिनु भएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री २ दिनपछि स्वदेश फर्कनु हुनेछ । तर दुई दिनपछि स्वदेश फर्कने प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र नेता बामदेव गौतम सिंगापुर नै किन जानु भयो ? भन्ने विषय यतिबेला चर्चामा छ ।
नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल मंगलबार र नेता बामदेव गौतम बुधबार सिंगापुर जानु भएको हो । पौडेल र गौतमको सिंगापुर यात्रालाई प्रधानमन्त्रीसंगको व्यक्तिगत भेटघाट भनिएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री जानु भएको १३ दिनपछि फर्कने बेलामा नेताहरु किन गए भन्ने विषय भने सामान्य मान्न नसकिने विश्लेषण गरिएको छ ।
कतिपय सञ्चार माध्यमहरुले ओली, पौडेल र गौतमको भेटघाटमा विशेष राजनीतिक छलफल हुने उल्लेख गरेका छन् । यसो हो भने पनि अहिले विष्णु पौडेल र बामदेव गौतमलाई देश बाहिर नै बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गनुपर्ने पार्टीको कुनै गम्भिर एजेन्डा नभएको बताइने गरीएको छ ।
यदी पार्टी कै विषयमा छलफल हो भने ओली नेपाल फर्किएपछी पनि त्यसमा छलफल हुन सक्ने भएकाले पार्टीको आन्तरीक विषयमा छलफल गर्न पौडेल र गौतम सिंगापुर जान नसक्ने विश्लेषकहरुको टिपप्णी छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक महासचिव पौडेल र नेता गौतमलाई सिंगापुरमा बोलाउनुका पछाडी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसंगको छलफलका लागी हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ ।
भारतीय गुप्तचर संस्था रअ पछिल्लो समय नेपालमा अलि बढी सक्रिय भएको देखिएको छ । केहि समय अगाडी रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल नेपाल आएका थिए ।
त्यस पछाडी नेपालमा बर्तमान संघीय लोकतान्त्रीक व्यवस्थाप्रति आक्रमण हुन थालेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको असान्दर्भीक चिन्ता देखिएको थियो । त्यसयता नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको चर्चा पनि बढिरहेको छ ।
असान्दर्भिक रुपमा नेताहरुबाट उठाइएको व्यवस्था परिवर्तनको चिन्ता र नेकपा नेताहरुको सिंगापुर यात्रालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । महासचिव विष्णु पौडेल ओलीका विश्वास पात्रका रुपमा चिनिनु हुन्छ भने गौतम पनि पछिल्लो समय ओलीकै पक्षमा देखिनुहुन्छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले आफु निकटका व्यक्तिलाई बोलाएर अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासंगको भेटघाटलाई जोड दिएका हुन् कि भन्ने अड्कल गर्न थालिएको छ ।